I-101 YEETATTOOS EZIBALASELEYO ZIKAROSE ZAMADODA: UYILO OLUPHOLILEYO + IMIBONO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-101 yeeTattoos eziBalaseleyo zikaRose zamadoda
Iitattoo zaseRose ziyabulelwa ngokungathandabuzekiyo ngenxa yenxalenye yokusebenza kwazo. Ngelixa i-rose tattoo ayisiyiyo ingcinga yokuqala onayo xa ucinga Iingcamango ze-badass tattoo ukuze amadoda afumane, kukho inani loyilo olupholileyo olubukeka luhle ngokwenene. Iitattoo zaseRose zabafana zinokubandakanya uyilo lwesintu olubomvu okanye imibono emincinci, elula. Unokukhetha umbala omnyama, omnyama, ongwevu, okanye omnyama nomhlophe.
Ngapha koko, uyilo lwe tattoo luhle kakhulu kwaye lunokusebenza kumalungu amaninzi omzimba, kubandakanya ingalo , ingalo , umkhono , isifuba , isandla , umva isihlahla, ithanga, intamo , igxalaba kunye umlenze . Kwaye ngelixa iiroses zinokuxubusha iingcinga zobufazi, inyani kukuba i-rose tattoo ngumqondiso ongunaphakade wothando, ukuthanda kunye nokukhumbula abafileyo okunokutolikwa ngeendlela ezininzi.
Ekugqibeleni, ezona tattoos ziphambili ze-rose zezo zihambelana nobuntu bakho kunye nesitayile. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungaqala phi, nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nokufumana i-tattoo yamadoda epholileyo. Nokuba ufuna i-rose enameva, umkhono weentyatyambo, okanye igalari yemifanekiso ukukhuthaza izimvo ezintsha nge-inki yakho, jonga ezi tattoos zerose ezimangalisayo zamadoda!
1Intsingiselo kaRose Tattoo
1.1I-Red Rose Tattoo
1.2I-Rose Rose Tattoo
1.3Umvambo omhlophe weRose
1.4Umbala weorenji rose
MbiniUyifumana phi iRose Tattoos?
3Uyilo olugqwesileyo lweRose Tattoo
Intsingiselo kaRose Tattoo
Kukho isizathu sokuba i-rose yenye yeetatoo eziceliweyo kwihlabathi namhlanje. Kumphezulu wayo, imele ubuhle kunye nendalo, kodwa ukumba nzulu kancinci, kubaluleke ngakumbi. Iifoto zeRose zezona ndlela zilungileyo zokubonisa uthando kumfazi. Nangona kunjalo, i-rose inokuthetha okungaphezulu kothando nothando.
I-tattoo ye-rose inokubonisa isithembiso, ukuqala okutsha, amandla, amandla, uxolo kunye nokunika imbeko kwabafileyo. Umbala unokukhulisa kwaye utshintshe intsingiselo yethambo ye-rose.
I-Red Rose Tattoo
I-red rose tattoo inxulunyaniswa nothando kunye nothando olunomdla. Lo msebenzi wobugcisa ungakhangeleka ngathi yimbali yemveli, kwaye abanye abantu bayathanda ukubandakanya isiqu kunye nameva ukuze zongezwe. I-rose tattoo enameva ifuzisela umbingelelo. Kwangokunjalo, unokuhlala ukhetha itattoo enegama lokuyalela ukuthembeka kunye nokuthembeka.
I-Rose Rose Tattoo
I-rose rose tattoo ibonisa ubuhlobo, ithemba, kunye nokuqala okutsha ngenxa yokuhlangana kwayo ixesha elide nelanga kunye nobushushu balo. Nangona kunjalo, kwiinkcubeko zaseAsia, umbala unokuhambisa uvuyo, ubulumko, kunye namandla.
Umvambo omhlophe weRose
I-tattoo emhlophe emhlophe luphawu lokucoceka, uvelwano kunye nokomoya. Njengentyatyambo yomtshato esemthethweni, i-rose emhlophe nayo inokubonisa ukungafi, uthando lokwenene.
Umbala weorenji rose
I-tattoo ye-orange rose ingabonisa ukudibanisa izinto. Ngenxa yokuba iorenji yindibaniselwano ebomvu nebomvu, irose eorenji inokuthetha uthando kunye nolonwabo lomntu okhethekileyo. Iitattoo zeorenji rose zinokuba lukhetho olufanelekileyo kubantu obathandayo kunye namalungu osapho.
I-tattoo emnyama emnyama kucingelwa ukuba imele ukufa, kwaye ngelixa inokubonakala ngathi iyothusa kwabanye, inokumela ukufa komkhwa ombi okanye indlela yakudala kunye nokuqala kwento entsha. Iitattoo ezimnyama nezimpunga ze-rose nazo zinokuchaza imvukelo, ke ukuba ufuna indlela yokwenza ingxelo, uyilo lwe-rose emnyama lunokuba namandla kakhulu.
Ekugqibeleni, nokuba ukhetha itattoo emnyama okanye enemibala exhomekeke kumyalezo ofuna ukuwuthumela kwihlabathi!
Uyifumana phi iRose Tattoos?
Ukuthatha isigqibo sokuba ungayifumana phi iitatoo emzimbeni wakho kunokuba ngumceli mngeni. Kodwa ukuba uthatha ixesha lokucinga malunga neentyatyambo ozifunayo, ukuba zinkulu kangakanani, kunye noyilo oluhamba nazo (umzekelo, amagqabi, iziqu kunye nameva), unokunciphisa ukhetho. Iitottoo zamadoda zibhetyebhetye, kodwa indawo ye-inki yakho inokuchaphazela uyilo olupheleleyo.
Umzekelo, iitatoo ezincinci ezincinci nezilula zilungele izandla, isihlahla, intamo , nakwezinye iindawo. Ukuba unomdla kwinani leeroses ezigqityiweyo ngeziqu zazo kunye namagqabi, umculi wakho uya kudinga iseyile elungileyo. Cinga ngomqolo wakho, isifuba , ingalo okanye umlenze wolu hlobo lwe tattoo rose.
Ukuba ufuna ukukala izinto phantsi, kodwa usafuna umzobo omkhulu ngokufanelekileyo, i-bicep yakho, igxalaba kunye nethanga bakho abagqatswa abakhulu, ngokunjalo. Okokugqibela, ukuba ufuna ukubeka igama lomntu omthandayo kwi-rose tattoo, cinga ukuyibeka esifubeni kufutshane nentliziyo yakho njengophawu lokuzinikela.
Khumbula ukuba i-tattoo ye-rose ingaba lula okanye iyinkimbinkimbi njengoko ungathanda, ekubonelela ngenkululeko enkulu ngokweengcamango. Ungafaka ii-roses kwezinye iitattoos, okanye ungaya kunye nerosisi emide.
Olu luhlu lukwenza iiroses zokuqala zibalaseleyo kumadoda; ungaqala ngentyatyambo encinci kwaye wongeze kuyo njengoko ungathanda kwixesha elizayo, mhlawumbi ude uthweswe isidanga kwi-rose rose tattoo sleeve engalweni yakho.
Uyilo olugqwesileyo lweRose Tattoo
Ngobuninzi bokuyila umvambo opholileyo onokukhetha kuwo, abafana banokukufumanisa kunzima ukukhetha umzobo omnye okanye isiqwenga somsebenzi wobugcisa. Apha ngezantsi, jonga ingqokelela yethu yezona tattoos ziphambili ze-rose kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo onokuzifumana!
iinwele zobuso bomntu oblong
uvavanyo olukhulu ngeenkwenkwezi ezintathu
umvambo womlenze kubafana
iinwele ezinde eziphantsi
ii tattoos ezipholileyo zamadoda
Ukudibanisa ama-50 ngaphezulu kweenwele zabantu